Ny tanànan'i Kildare dia nanomboka tamin'ny 5th taonjato ary naka ny anarany avy amin'ny Gaelic, Cill Dara izay midika hoe Church of the Oak, ilay monasitera natsangan'i St Brigid teo amin'ilay toerana teo ambanin'ny hazo terebinta. Manankarena amin'ny lova sy ny tantara ary ny tanàna tany am-boalohany ny tanànath taonjato maro Market House dia manolotra topy maso ny lasa tamin'ny alàlan'ny traikefa virtoaly lalina, teboka fanombohana tsara ho an'ny fitsidihanao. Eo akaiky eo ny Katedraly St Brigid sy ny Tilikambo Boribory - eo akaikin'ny 33 metatra ny haavon'ny tilikambo ary io no tilikambo boribory avo indrindra azo zakaina any Irlandy, azonao antoka fa hahita fahitana tsara momba ny tanàna sy ny Lemaka Curragh ianao. St Brigid's Well dia mandeha tsy lavitra ary ny fitsidihana an'i Solas Bhride Hermitages no hitantara ny tantarany.
Ny hazakazaka moto iraisam-pirenena voalohany natao tany Angletera na Irlandy, ny Gordon Bennett Cup, dia nandalo an'i Kildare. Amin'ny vanim-potoana maoderina kokoa, ny tanàna dia toeran'ireo mpivarotra fivarotana mitsidika an'i Kildare Village ary mandritra ny andro fialantsasatra ao amin'ny National National Stud and Gardens malaza any Irlanda.
Lily & Wild no mpiara-miasa tonga lafatra aminao amin'ny menus an-toerana sy amin'ny vanim-potoana mahaliana miaraka amina serivisy fikarakarana matihanina tsy manam-paharoa.